3 siyaabood oo wax loo Easy in Dhegayso Radio Online
Maalmahan, raadiyayaasha jirka helayso huriye. Laakiin radio ahayd sida in ay dhagaystaan ​​noocyada kala duwan ee muusiko ah oo aan haysan si ay u doortaan iyo ciyaaro mid ka mid ah. Marka ay tahay da'da internet-ka, tiro badan oo ah dadka bilowday raadinta ciyaartoyda radio online internetka. Sidaas darteed codsiyada radio online waxaa lagu bilaabay qaadashada horumariyo. In this article waxaan ku qor doonaa qaar ka mid ah xal u ciyaari radio online for kumbiyuutarada, telefoonada, iyo murriyado. Waxaa ka jira qaar ka mid ah habka uu u ciyaaro radio online on dhammaan dhufto ee kuwan. Read article inaad ogaato oo ku saabsan xalka.
Xalka # 1: Iyada oo websites radio internet
Xalka # 2: Iyadoo ciyaartoyda radio online
Xalka # 3: Iyada oo Chine radio online
Doorashooyinkaasi waxay tahay doorasho fudud inuu u ciyaaro raadiyaha. Waxaa laga yaabaa inaad in la furo website ee browser. Ciyaaryahanka ayaa si toos ah uu ku raran yihiin gudaha biraawsarkaaga iyo aad si toos ah uga siiyaa biraawsarkaaga ciyaari karo radio. Waxaan taxay qaar ka mid ah goobaha ay:
Musicovery waa website weyn in ay dhegeystaan ​​radio online; Waxa ay taageertaa playlist sida ay niyadda. Naqdida waa wanaagsan. Interface waa fiican iyo weliba. Riix Link in booqo bogga internetka. Feature niyadda waxa uu ka dhigayaa mid aad loo jecel yahay.
Bogga internetka ee buffers song xitaa ku saabsan xidhiidhada gaabis ah, isku xirnaanta waa wanaagsan. Waxay leedahay database badan oo ah idaacadaha online. Waxaa si toos ah waxay bilaabantaa marka aad furto website-ka ciyaaro heesta.
Waxaa hayaa taariikhda heesta. Waxa aanu lacag ujeedada, eedeeyay ma qarsoona. Database badan oo saldhigyada.
Waxaa sidoo kale waa ciyaaryahan website radio free; Wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka ah in ay doortaan ka doorato oo caan ah iyo sidoo kale. Nice interface, ay fududahay in la shaqeeyaan.
5. dijital ah laga keeno
Waxay leedahay database yar, channels oo kaliya ku dhawaad ​​100 laakiin channels ku qoran yihiin aad loo jecel yahay. Waxaad isku diiwaan gelin kartaa in si dijital ah laga keeno la isticmaalayo google + ama facebook ah.
T ip: Halkan yihiin 25 ka badan radio goobaha online in aad kala dooran karto.
Haddii aad ku jirtid PC ah waa fursad weyn oo aad ku ciyaari raadiyaha iyada oo ciyaaryahan u yar internetka. Ciyaartoydan aad ku rakiban aad PC ama qaar ka mid ah ay yihiin oo kaliya browser fur-aad. Sidaa darteed uma baahnid in aad ku shuban ciyaaryahanka loo siiyaa biraawsarkaaga mar kale iyo mar kale sida in xal ugu horeysay. Macluumaadka waxaa loo wada baabbi'in kaliya ciyaaro song ma loo yaqaan SliTaz, ciyaaryahanka.
App waxaa lagu heli karaa 8 daaqadaha app lagu kaydiyo, la jaan qaada telefoonka daaqadaha iyo sidoo. Waxa aanu ku kaydiso liiska jecel degaanka; waxaa u qabaneysa in hadhaysaa, sida in aad ka heli kartaa liiska mid ka mid ah qalabka xaqa gashid.
Website Si Rasmi Ah www.MiniRadioPlayer.net
Waxay leedahay fursad weyn ay u bilowdo dhex hotkey ah. 300+ qaybaha ku qoran yihiin.
Waa lacag la'aan ah laga heli karaa. Size aad u yar, la jaan qaada oo dhan versions of daaqadaha.
Waxaa jira dhowr ah ayaa diyaar u ah codsiyada kala duwan madal sida android, macruufka. Codsiyada xirnaado servers radio online internetka. Qalab Your waa in la xiran internetka si ay u isticmaalaan codsiyadaas. Si fudud waxaad ka heli kartaa codsiyada dhowr ah la interfaces weyn ee App Store ah.
Online Radio Apps u Android:
App waxa uu leeyahay in ka badan 50 milyan oo downloads. Interface ee app waa weyn yahay. Waxaad heli doontaa 5 fursadaha menu clickable ay ka mid yihiin Home, Browse, Baadh, My Profile, iyo Connect saaxiibada. Arrintan oo uu weheliyo ciyaaryahanka waxaad yeelan doontaa 4 tabs clickable magacaabay Related, Recent, ka dib, iyo fursadaha. Waxaad isticmaali kartaa iyaga dhex si fudud.
Waxay leedahay in ka badan 100,000 oo idaacadaha dhab ah iyo in ka badan 4 milyan oo Nayroobi ka soo adduunka oo dhan. Codsiga waxaa laga heli karaa dukaanka android play lacag la'aan ah oo ah qiimaha, si aad u hesho app click here .
Radio 2. Internet
App Tani ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay in ka badan 50 milyan oo downloads, muusikada ciyaaro iyada oo app aad u baahan tahay oo kaliya la xidhiidha xogta ah. Xitaa waxaa ka shaqeeya ku saabsan xidhiidhada 2G.
Interface waa wax fiican oo si sahlan loo isticmaali laakiin waa yar jiidasho leh marka la barbar dhigo mid hore. Waxay leedahay gaar ah u hooseeya qaybta radio xawaaraha, taas oo feature ugu weyn ee app.
Waxaad kala sooci karaa liiska xarun raadiye oo ay goobta iyo sidoo kale intaas dheer in sifayn ah. Waxay leedahay rating ah 4.7 ee play google ka. Si aad u hesho app click here .
Waxay leedahay database ka mid ah dunida oo dhan in ka badan 50,000 oo raadiyaha. Haddii aadan heli karin saldhiga ay ku leeyihiin goobidda, aad qaban karto hawlgalka caleenta ka tusaha. Waxa kale oo uu leeyahay barbaraha taageera on dhammaan taleefanada android android 2.3 iyo wixii ka dambeeyey. Its interface waa wax fiican.
a. doorasho Guard Data si ay u ilaaliyaan ka soo gaartay xogta halka ku xiran shabakada gacanta halkii wifi.
b. Waxaad rogto karaa iyada oo loo marayo FM ee ugu danbeysay ee uu ciyaaray.
c. Waxaad button dib u socon isticmaali kartaa mar kale u ciyaaro aad song jecel.
d. muuqaalada saacad Hurdada iyo qaylo ayaa la heli karaa.
Online Radio Apps ee macruufka:
1. Lugood Radio
Tani waa codsi rasmi ah oo lacag la'aan ah oo ay bixiso tufaax laftiisa. Waxaa diyaar u ah dhammaan qalabka inankeeda, oo ay ku jiraan iPhone, iPad, iPod taabto, Mac, Apple TV. Interface waa maskaxda ku aragtaan. Apple waa wanaagsan ee la dhigaayo interfaces weyn. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan codsiga. Xitaa waxaad weydiisan kartaa shir Xasaasi ah uu u ciyaaro app radio iyo weydiin kartaa oo ku saabsan song in la ciyaaray. Waxaa jira doorasho bulshada share aad kaas oo tweet kartaa saldhigga aad ugu jeceshahay.
Oo dhan heeso aad maqasheen oo hore ayaa laga heli karaa taariikhda sida in aad si fudud u soo ceshano karo halkaas ka iyo waxaad awoodi doontaa inaad ka mid ah liiska ay si toos ah u iibsadaan.
Waa app la mid ah in aan soo sheegay meesha ugu sareysa ee app android ee. Sidaas, Waxay leedahay dhow interface la mid ah oo qoreysa sida app in. Horumarinta ayaa app ee la heli karo ee dhamaan dhufto ee ku.
Waxaa laga heli karaa labada iPhone iyo iPad.
App waxaa loogu talagalay iPhone, iPad, iPod iyo taabashada. Illaa iyo hadda app ku maqan yahay qaar ka mid ah feature weyn sida tooska ah Lugood link si ay u iibsadaan gabaygii, info dheeraad ah oo ku saabsan song ah, ku dar in iwm jecel Laakiin sameeysa ayaa balan qaaday in lagu daro waxyaabahan mustaqbalka dhow.
> Resource > Video > 3 Siyaabaha Dhegayso Radio Online